Semalt: Zvikamu Zvokuramba Basa (DoS) Kurwisa
Kutambudzwa kweDS inzira yakaipa yekuita kuti seva yako kana masetero emitambo arege kuwanikwa kwekanguva kana kusingaperi. Vatengesi vanoita basa iri nekuita mabasa akasiyana. Somugumisiro, vanogona kusimudza kana kupindira maakaunti enyu kweupenyu hwose - umzugsreinigung zürich. Kuvhiringidzwa kweHurumende kunorwisana kunowanzobatana nemhando yakawanda yemichina yakashandiswa inoshandiswa kutsvaga makombiyuta matsva nemafoni. Iyi mishonga inokonzera kusagadzikana kwakasiyana-siyana uye inofashura zvidzidzo zvinotarirwa nezvikumbiro zvinopfuurira, mibvunzo, uye zvisingadiwi mharidzo. Izvo zvinorwisa maDS zvinogona kukanganisa mafaira ako uye zvinowanzourayiwa sehodzi.
Andrew Dyhan, uyo Semalt Mutengi Wakabudirira Muteereri, anotaura kuti kutambudzwa kweDS kunokamurwa kuita zvikamu zviviri zvakasiyana:
1. Kushanda kwekuita DoS kurwisa
Rudzi urwu rwekudzivirira kweDS rinosanganisira mafashamo eHTTP, zero-zay kurwisa kana kurwisa zvishoma (Slowloris kana RUDY). Izvi Kurwisa kweDS zvinotarisa kukonzera matambudziko kwehuwandu hwemashandisirwo ekushanda, zvinyorwa zvekukurukurirana, uye mapurogiramu ewebhu. Vanoratidzika sevasina mhosva uye vanokodzera, uye zvikumbiro zvinotaridzika zvakavimbika, asi hukuru hwavo hunotaridzwa nenzira yezvikumbiro pamusi wechipiri..Iri kurwisa reDo rinosanganisa kuderedza zvidzidzo zvinotarisirwa nezvizhinji zvekukumbira, zvichiita kuti chiyeuchidzo chikuru uye kushandisa CPU. Ichazoguma kana kuparadza makombiyuta ako.
2. Network masvingo DoS kurwisa
Nhandare yakatarisana neDoS kurwisa inoumba DP mafuro, SYN mafashamo, NTP kukurudzira, DNS kukurudzira, SSDP kukurudzira, uye kuparadzanisa kweP. Izvo zvose izvi zvinosvika pamagetsi uye zvinowanikwa mugigabits kwechipiri. Izvo zvinoyerwawo nenzira yepakiti pamusi wechipiri uye nguva dzose inourawa ne zombie makombiyuta kana botnets.
Maitiro eDSS anopararira sei?
VaKybercriminals vanoda kutsvaga nekudzivirira mazana kuzviuru, kunyange mamiriyoni e-smartphones nemakombiyuta. Vanoda kuita sevatenzi veZombies kana botnet mitambo uye vanonunura kutambiswa kweDenmark Denial of Service (DDoS), mapoka makuru epamende, uye mamwe maitiro ekupandukira. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, ma-cybercriminals anotanga nzvimbo yakakura yeZombies nemichina ine utachiona kuti iwane mishandisirwo matsva nemashandisirwo, zvichida sekutengeserana zvakananga kana pane zvekuvakirwa. Va spammers vanogona kubvarhara uye kutenga mabanzura ekushandisa mapikisa makuru ekupikisa.
Zita remadziro nematombo avo:
Muumbi we botnet anonzi bot botderter kana botmaster. Anotonga maBoS kubva munzvimbo dziri kure uye anopa mamwe mabasa kwavari zuva rega rega. Vashandi vanotaurirana nevhareji yeDoS kuburikidza nemigwagwa yakavanzwa yakadai semitemo isina mhosva, mawebhusayithi eHTTP uye IRC mitanda. Anokwanisawo kushandisa mashandisirwo emasikirwo akafanana ne Twitter, Facebook, uye LinkedIn kuti ataure nevamwe.
Mavhareta ebhota rinogona kutaura nyore kana kubatanidzwa nemakombiyuta eDoS uye mamwe mavhareta ebhodaneti, zvichigadzira p2P inoshanda yakanyatsogadzirirwa nenyanzvi imwe chete kana yakawanda bot. Zvinoreva kuti ani naani haagoni kupa mirayiridzo kumatare eDoS sezvo kukurudzirwa kune mitsva yakawanda uye chete vanonyangadza vanoziva nezvekwakabva. Mabhoti eDoS anoramba akavanzwa mushure mebasa rekunyengedza uye achiita sokuti vashandi vavo vane zvikwata zvepamusoro, izvo zvisingakoshi pasina.